Seychelles inochema kufa kweaimbova Mutevedzeri weMutungamiriri Joseph Belmont |
Location: musha » Kutumira » Nyika | Dunhu » Secheres » Seychelles inochema kushaya kweaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika, Joseph Belmont
Seychelles inochema kushaya kweaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika, Joseph Belmont
rakanyorwa Alain St. Ange
Seychelles nhasi iri kuchema kushaya kwaJoseph Belmont, aimbova Mutevedzeri weMutungamiriri wezvitsuwa akashaya musi wa28 Ndira. Joseph Belmont aive agronomy nebasa uye akapinda mune zvematongerwo enyika seGurukota muna 1982 mushure memakore achishanda senyanzvi mubazi rezvekurima rezvitsuwa. Aive zvakare CEO wekutanga weIsland Development Company yeSeychelles achitonga zvitsuwa zvese zveHurumende zvekunze zvezvitsuwa.
Muna 1992 Joseph Belmont aive Sachigaro weSeychelles Constitutional Commission apo zvitsuwa zvakagara kugadzira bumbiro idzva mushure memakore ekuve Bato reNyika pasi peMutungamiri Albert Rene. Joseph akava Gurukota Rakadomwa muna 1998 uye muna 2004 pasi peHurumende yaJames Michel, akava Mutevedzeri weMutungamiriri weSeychelles.
Muna 2009 Joseph Belmont seMutevedzeri weMutungamiri akanga akabatawo Tourism Portfolio apo Alain St.Ange akaunzwa kuti atungamirire Dhipatimendi reKushambadzira kuSeychelles Tourism Board. VP Belmont akaonekwa kuTourism Trade Fairs padivi paAlain St.Ange mumakore ekutanga ekutanga indasitiri yekushanya kwechitsuwa ichi.
“Ndakafara kushanda naJoseph Belmont. Aive mutungamiri aitaura zvinyoro aipa tsvimbo yake simba. Tose takapiwa basa rekutanga indasitiri yezvekushanya mushure mekunge makambani akazvimirira ega ekutengeserana amanikidza Hurumende kuti munhu aite basa rekutengesa pachitsuwa ichi uye gare gare Tourism Board. Ndichibva kumakambani akazvimirira ndakasvitsa zvishuwo uye zvikumbiro zvebhizimusi rakazvimirira kune Mutevedzeri weMutungamiriri weBelmont uyo aigara achigashira mazano aibva kumakambani akazvimirira aaiona sechikwata chake chepamberi, uye pamwe chete takaendesa nyika” akadaro Alain St. Ange, aimbova Gurukota rezvekushanya kweSeychelles
hurumende James Michel Joseph Belmont Marketing Secheres ushanyi
Nei Drones Dzichirova Korean Airlines Ndege?
Rwanda - Uganda Border Post Kuvhurwa: Nhau dzakanaka dzekutengeserana nekushanya
Black Pepper Market Outlook Inovhara Bhizinesi Idzva...
Hainan basa remahara chitoro kutengesa kusvika 33% gore rino
Iyo Blossom Hotel Houston Inotanga Zuva raamai Package
Pillow Cases Market Outlook Inovhara Bhizinesi Idzva...
Alain St Ange anga achishanda mubhizimusi rekushanya kubva 2009. Akagadzwa saDirector weKushambadzira weSychelles neMutungamiri uye Gurukota rezveKushanya James Michel.
Akagadzwa saMutungamiriri weKushambadzira weSychelles neMutungamiriri uye Gurukota rezveKushanya, James Michel. Mushure megore rimwe re
Mushure megore rimwe rebasa, akakwidziridzwa pachinzvimbo cheMukuru weSychelles Tourism Board.
Muna 2012 Indian Ocean Vanilla Islands Regional Organisation yakaumbwa uye St Ange yakagadzwa semutungamiri wekutanga wesangano.
Muna 2012 pakagadziridzwa zvakare dare remakurukota, St Ange akagadzwa seGurukota rezvekushanya neTsika iyo yaakasiya chigaro musi wa28 Zvita 2016 kuitira kuti aite chigaro chemunyori mukuru weWorld Tourism Organisation.
KuUNWTO General Assembly kuChengdu kuChina, munhu anga achitsvagirwa "Speakers Circuit" yezvekushanya nekusimudzira nekusimudzira ndiAlain St. Ange.
St. Ange ndiye aimbova Seychelles Gurukota rezvekushanya, Civil Aviation, Ports neMarine vakasiya chigaro muna Zvita wegore rapfuura kukwikwidza chinzvimbo cheMunyori Mukuru weUNWTO. Kana humbowo hwake kana gwaro rekubvumidzwa rakabviswa nenyika yake kwasara zuva rimwe chete kuti sarudzo dziitwe muMadrid, Alain St. Ange akaratidza hukuru hwake semutauri paakataura ku UNWTO kuungana nenyasha, kushuva, uye chimiro.
Kutaura kwake kunofambisa kwakanyorwa senge kune imwe yeakanakisa ekumaka hurukuro kuUN yenyika yepasi rose muviri.
Nyika dzemu Africa dzinowanzo rangarira kero yake yekuUganda yeEast Africa Tourism Platform apo iye aive muyenzi anokudzwa.
Sewaimbova Gurukota rezveKushanya, St. Ange aigara achitaura uye achifarirwa mutauri uye aiwanzoonekwa achitaurira maforamu uye misangano akamiririra nyika yake. Kukwanisa kwake kutaura 'kubva pahombodo' kwaigara kuchionekwa senge kugona kugona. Aigara achiti anotaura zvichibva pamoyo.
MuSeychelles anorangarirwa nekero yekumaka panguva yekuvhurwa kwepamutemo kwechitsuwa cheCarnaval International de Victoria paakadzokorora mazwi erwiyo rwaJohn Lennon rwakakurumbira… ”ungati ndiri muroti, asi handisi ndega. Rimwe zuva imi mose muchabatana nesu uye nyika ichave iri nani ". Mapepanhau epasi rese akaungana muSeychelles pazuva rakamhanya nemashoko aSt.Ange ayo akaita misoro kwese kwese.
St. Ange yakapa hurukuro yakakosha ye "Tourism & Bhizinesi Musangano muCanada"
Seychelles muenzaniso wakanaka wekushanya kwakasimba. Saka izvi hazvishamisi kuona Alain St.Ange achitsvakwa semukurukuri mudunhu renyika dzakawanda.
Nhengo ye Travelmarketingnetwork.